ထိုင်းနိုင်ငံ၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ၇ သန်းကျော် ထိုးနှံပြီးဖြစ် - Xinhua News Agency
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ Bang Khae ဈေး၌ လူထုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအတွင်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့် Sinovac Biotech COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနေသည်ကို တွေ့ရစဥ် (ဆင်ဟွာ)
ဘန်ကောက်၊ ဇွန် ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါပျံ့နှံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုကို အရှိန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေ ၇,၀၀၃,၇၈၃ အား ထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံအတွင်း၌ လူထုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု စတင်ပြီးနောက် လွန်ခဲ့သော ၁၀ ရက်အထိ ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေ ၂.၉ သန်းကျော်ထိုးနှံပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း COVID-19 အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲရေးစင်တာ (CCSA) မှ ထုတ်ပြန်သည့် အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
ဇွန် ၁၆ ရက်အထိ နိုင်ငံလူဦးရေ သန်း၇၀ ခန့်၏ ၇.၃ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် စုစုပေါင်း ၅.၁ သန်းမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမတစ်ကြိမ်အား ထိုးနှံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ် ချန်-အို-ချာ (Prayut Chan-o-cha)က နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များအား ၄ လအတွင်း အပြည့်အဝ ပြန်လည်လက်ခံရန် ဇွန် ၁၆ ရက်နှောင်းပိုင်းတွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ထိုပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိရန်အတွက် ဇူလိုင်လမှစ၍ လစဉ် ပျမ်းမျှကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ ၁၀ သန်းအား ထိုးနှံနိုင်ရန် စီစဥ်ထားကြောင်းနှင့် အောက်တိုဘာလ အစောပိုင်းတွင် လူဦးရေ သန်း၅၀ အား ပထမအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်ရန် ရည်မှန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ် ၃,၁၂၉ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၃၀ ဦးရှိပြီး အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၂၀၇,၇၂၄ ဦးနှင့် သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၁,၅၅၅ ဦးရှိကြောင်း CCSA မှ သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသားနှင့် ပြည်တွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားများအတွက် quarantine အစီအမံများအား နောက်လမှစ၍ ပြုပြင်ဖွယ်ရှိကြောင်း CCSA မှ သိရသည်။ (Xinhua)
BANGKOK, June 17 (Xinhua) — Thailand has administered 7,003,783 doses of COVID-19 vaccines so far, as the nation accelerates its vaccination to fight against the spread of the coronavirus.
A total of 5.1 million people, or about 7.3 percent of the country’s nearly 70-million population, received the first shots of COVID-19 vaccines as of Wednesday, the data showed.
Prime Minister Prayut Chan-o-cha announced late Wednesday to fully reopen the country to foreign visitors in four months.
In order to achieve this goal, an average of 10 million vaccine doses is planned to be administered each month from July onwards, andathreshold of 50 million people given first shots is targeted by early October, he said.
Thailand reported 3,129 new COVID-19 cases and 30 deaths on Thursday, bringing the total to 207,724 infections and 1,555 deaths, according to the CCSA.
The CCSA said the quarantine measures for both Thai and international inbound travelers are likely to be modified from
Photo-A woman receivesadose of COVID-19 vaccine developed by China’s Sinovac Biotech duringamass vaccine inoculation at Bang Khae Market in Bangkok, Thailand, March 19, 2021. (Xinhua/Rachen Sageamsak)